‘राजनीति, व्यापार र समाजसेवाको त्रिवेणी’ – बेलप्रसाद श्रेष्ठ | गृहपृष्ठ
Home समाचार ‘राजनीति, व्यापार र समाजसेवाको त्रिवेणी’ – बेलप्रसाद श्रेष्ठ
राजनीति, व्यापार र समाजसेवाको त्रिवेणी
पूर्वप्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका
सञ्चालक, द हिमालय होराइजन होटल सन एण्ड स्नो प्रालि
मान्छेलाई अधिकार र जिम्मेवारी दुवै दिएपछि प्राप्त हुने प्रतिफल सकारात्मक हुने विचार राख्छन् धुलिखेल नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख (मेयर) बेलप्रसाद श्रेष्ठ । यही विचारलाई व्यवहारमा लागू गरेकै कारण उनी धुलिखेल नगरपालिकामा चारपटक मेयर भइसकेका छन् । यस नगरपालिकाको विकास गर्नमा उनको महत्त्वपूर्ण देन रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
छर्लङ्ग हिमाल देखिने गरी अवस्थित धुलिखेल बजार कुनै बेला खुला शौचालयजस्तै देखिन्थ्यो । अव्यवस्थित तथा दुर्गन्धित आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने विचार उनी सानैदेखि गरिरहन्थे । पेशाले ओभरसियर उनले यही विचारले गर्दा तत्कालीन काभ्रे जिल्ला पञ्चायतको जागीर छोडेका थिए । यही जागीरमा छँदा नै अमेरिकी स्वयम्सेवक संस्था ‘पिस्कोर’का स्वयम्सेवीहरूलाई पढाउन उनी डेभिस युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, अमेरिका पुगेका थिए । ‘सिभिल वर्क र अन्तरसंस्कृतिबारे पढाउन १ वर्ष अमेरिकामा रहँदा नै उनी त्यहाँको विकासबाट प्रभावित भएका थिए । एक दिन अमेरिकीहरूले उनलाई सोधे, ‘मोटर चलाउन आउँछ ? आउँदैन, स्वीमिङ् गर्न, गीतार बजाउन…? अहँ केही पनि गर्न आउँदैन, अनि के गर्न आउँछ त तिमीलाई ?’ उनी नाजवाफ भएका थिए त्यतिबेला । त्यो घटनाले उनको मनभित्र देश फर्केर आफ्नै जन्मस्थलमा केही गर्ने दृढता जाग्यो ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारमा जन्मेका श्रेष्ठले अमेरिका हुँदा नै नेपाल फर्कनेबित्तिकै होटल खोल्ने विचार गरेका थिए । उनले २०२६ सालमा ७ सय रुपैयाँ लगानीमा काभ्रेकै पहिलो होटल खोले- ‘धुलिखेल लज’का नाममा । होटल चलाउन शुरूको केही समय उनी एक्लै खटे । भाँडा माझ्ने, चर्पी सफा गर्ने, लजका कपडाहरू धुनेलगायतका सबै काम आफै गरेको देखेपछि स्थानीयवासीहरूले उनको प्रशस्त कुरा काटे । ‘मेहनत र आत्मविश्वासका धनी उनले कसैको कुरा सुनेनन् । उनले जग हालेको होटल व्यवसाय आज ‘द हिमालय होराइजन होटल सन एण्ड स्नो प्रालि’का रूपमा विकास भएको छ । २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस होटलमा पाँचतारेसरहको सुविधा उपलब्ध रहेको उनी बताउँछन् । ४० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको यस होटलको व्यवस्थापन हाल उनका छोरा र भाइले सम्हालेका छन् ।
टाढाबाट हेर्दा नदेखिएका सम्भावनाहरू नजिकबाट नियालेपछि भेटिन्छ भन्ने मान्यताका धनी श्रेष्ठले व्यवसाय र सामाजिक कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाएका छन् । उनी २०३२ सालमा तत्कालीन धुलिखेल गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ९ को वडाध्यक्ष भए । जिल्ला पञ्चायत र केही जर्मन नागरिकहरूको सहयोगमा धुलिखेलमा खानेपानी परियोजना, शौचालय बनाउने र सरसफाइ गर्ने अभियानलाई अघि बढाए । शौचालय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन उनले आफ्नो घरमा शौचालय बनाउने र सरसफाइ गर्नेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरे । त्यसपछि धुलिखेल बजारका प्रायः सबै घरमा शौचालय बन्न थालेको उनी बताउँछन् ।
एउटा व्यवस्थापकले आफ्नो व्यवसायमा संलग्न सबैमा ‘हामी र हाम्रो’ भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्ने उनको धारणा छ । यो भावनाले मान्छेलाई कामप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्ने उनको बुझाइ छ । ‘मान्छे हरेक कुरामा आफ्नो हक चाहने प्राणी हो, अधिकार दिनुपर्छ र निरन्तर अनुगमन गर्न पनि भुल्नु हुँदैन । राजनीति, समाजसेवा वा व्यवसाय जहाँ पनि यो रणनीति लागू हुन्छ,’ उनी भन्छन् । धुलिखेल नगरपालिकाको वरपर विद्युतीकरण गर्दा उनले सरकारसँग बिजुलीको पोल र तार मात्र माग गरे । पोल बोक्ने, तार टाँग्नेलगायत सम्पूर्ण काम स्थानीयवासीले आफै गरी गाउँमा बत्ती बाले । आफ्नो पसिनाको बढी महत्त्व हुने हुँदा पछिल्ला दिनमा मर्मत सम्भार पनि गाउँलेले आफै गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
यसैक्रममा धुलिखेलको समग्र विकासका लागि श्रेष्ठले स्थानीयवासीको सहयोगमा यसलाई गाउँ पञ्चायतबाट नगर पञ्चायत बनाउनका लागि पूर्वाधारहरू तयार पारे । उनको पालामा एक शय्या, एक चिकित्सकबाट शुरू गरेको धुलिखेल अस्पतालमा हाल ३ सय शय्या र ५० चिकित्सक कार्यरत छन् । २०४४ सालमा नगरपञ्चायत बनेको धुलिखेलको उनी पहिलो निर्वाचित प्रमुख हुन् । बहुदल आएपछि लगातार थप दुइ कार्यकाल निर्वाचित र १ वर्ष मनोनीत गरी २०६० सालसम्म उनले धुलिखेल नगरपालिकाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । उनको कार्यकालमा धुलिखेल बजारभित्रको बाटो ढुङ्गा छापेर फराकिलो पारे, ढलको व्यवस्था गरे । नगरपालिका वरवरका क्षेत्रसम्म विद्युत् र खानेपानीलाई व्यवस्थित गरे । बजारमा बसपार्क, सार्वजनिक खेल मैदान, धुलिखेल पार्क निर्माणलगायतका कार्यमा आफू प्रत्यक्ष संलग्न भएको उनी बताउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको स्थापना तथा विकासका लागि उनको निकै योगदान रहेको छ । हाल उनी अस्पतालको अध्यक्ष र विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य छन् ।
आफूलाई प्रजातान्त्रिक विचारधाराको बताउने श्रेष्ठ केही गर्छु भन्नेले सधैं दिमागमा योजना बोकेर हिँड्नुपर्ने बताउँछन् । आफ्ना लागि भन्दा पछिल्लो पुस्ताका लागि केही काम गर्न सकेकोमा उनी गौरव गर्छन् । अहिले रवीन्द्रमान श्रेष्ठको ‘बुद्धत्व विज्ञान’ भन्ने पुस्तक पढिरहेका उनी आत्मनिर्भरताको दरिलो बाटो के हुन सक्छ भन्ने खोजीमा लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक नागरिकले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नियम, कानून र वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ सत्तरीवर्षको श्रेष्ठमा जनतामाझ बसेर काम गर्ने चाहना अझै कायम छ ।
राष्ट्रपति डा. यादवको कुवेत भ्रमण
काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शुक्रवार कुवेत प्रस्थान गरेका छन् । कुवेतका अमीर सेख सवाह अल अहमद अल जविर अल सवाहको निमन्त्रणामा तीनदिने राजकीय भ्रमणमा उनी कुवेत गएका हुन् । राष्ट्रपति डा. यादव कुवेतको ५०औं स्वतन्त्रता दिवस, २०औं विजयदिवस तथा अमीर अल सवाहको पाँचौँ राज्यारोहणको विशेष राजकीय समारोहमा सरिक हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपति डा. यादवलाई उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्टकक्षमा बिदाइ गरेका थिए । भ्रमणदलमा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईलगायत छन् । राष्ट्रपति डा. यादव आगामी आइतवार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
सबै दललाई सरकारमा आउन आग्रह
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले शान्ति र संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सफल बनाउन वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन सबै प्रमुख दललाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काठमाडौं शाखाको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको शुक्रवार उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री अधिकारीले शान्ति र संविधान सफल बनाउने उद्देश्य लिएर वर्तमान सरकार गठन भएकाले एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशवादी दलहरूलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका हुन् । ‘अब सबै दल मिलेर अगाडि बढ्दै मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुँदैन भन्नेमा आमजनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणबाट आर्थिक समृद्धितर्फ जानु जरुरी छ ।’
सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने जानकारी दिँदै उनले निजीक्षेत्रको सहभागितालाई सम्मान दिइने बताए । व्यवसायीहरूलाई गैरकानूनी कामतिर नलाग्न पनि उपप्रम अधिकारीले अनुरोध गरे । ‘राजस्व छलेर कोही पनि धनी हुँदैन, राजस्व भनेको गरीब जनताको पैसा हो,’ उनले भने, ‘राजस्व छल्नतिर लाग्ने होइन, उत्पादकत्व बढाउने काम गरौं ।’
अधिकारीले शाखाको मागअनुसार भवन निर्माणका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र पत्रकारहरूको उपचारको उचित व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
एमाओवादी-एमाले वार्ता निष्कर्षविहीन
काठमाडौं । एनेकपा माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्बन्धमा शुक्रवार बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ । सातबुँदे सहमतिको मर्मविपरीत गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको प्रस्तावप्रति आफ्नो दल असहमत रहेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सातबुँदे सहमति संशोधन पनि गर्ने र गृह मन्त्रालय पनि आफै राख्ने एमालेको निर्णय मान्न हामी बाध्य छैनौं,’ श्रेष्ठले भने । खनाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्नेबारेमा पार्टीको शुक्रवार नै बस्ने स्थायी समिति बैठकले निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र ईइश्वर पोखरेल तथा एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
संविधानका विवादित विषय मिलाउन उपसमिति
काठमाडौं । संवैधानिक समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले संविधान लेखनमा देखिएका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उपसमितिमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सभासद् कल्पना राणा रहने छन् भने मधेशवादी दलहरूबाट एक जना राखिने भएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न सात विषयगत समितिहरूमा बाँकी ८३ बुँदामा सहमति हुन सकेको छैन । समितिले आफ्नो कार्यविधि तय गरी यही फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ ।
जिट्कोअन्तर्गत भाषा प्रशिक्षण निःशुल्क
काठमाडौं । जापान इण्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) अन्तरगत जापान जाने नेपाली कामदारले निःशुल्क भाषा सिक्न पाउने भएका छन् । प्रशिक्षार्थी कामदारले जापानी भाषा सिक्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने जिट्कोका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केनसुकी सुजुकीले बताएका हुन् । शुक्रवार जिट्को अन्तर्गत कामदार पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपालमा भाषा सिकाउने प्रक्रिया नै उल्टो रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रशिक्षार्थी कामदारलाई भाषा सिक्दा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा यहाँ कामदार पठाउने कम्पनी तथा कामदारले नै तिरिरहेका रहेछन् ।’
हाल जिट्कोले नेपाललगायत चीन, इण्डोनेशिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्सजस्ता देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लगिरहेको छ । सुजुकीका अनुसार नेपालबाहेक अन्य देशहरूमा भाषा सिकाइ शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने गरेको छ । नेपालीले पनि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीबाटै भाषा सिकाइ शुल्क माग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य नेपालबाट प्रशिक्षार्थीका रूपमा जाने कामदारलाई भाषा सिकाइ तथा अन्य शुल्क लिएर थप भारमा पार्नु होइन,’ सुजुकीले भने, ‘यस्तो शुल्क जिट्कोअन्तर्गत रहेका कामदार माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्दछन् ।’
भ्रमणको क्रममा सुजुकीले नेपाल सरकारले तोकेको भाषा परीक्षाको मापदण्ड जापानी स्तरअनुसार नभएको बताए । ‘हाल सरकाले तोकेको कोर्सअनुसार सिकेर जापानी भाषा बुझ्न सकिँदैन । योभन्दा बढी सिकाउनु पर्दछ,’ उनले भने । सुजुकीले पाथीभारा ओभरसिजलगायतका म्यानपावर कम्पनी र जापानी भाषा सिकाउने दीपज्योति एजुकेशनलको भ्रमण गरेका थिए । दीपज्योतिले जापानको भाषा, धर्म, संस्कृति, रहनसहनसँग मिल्दोजुल्दो तरीकाबाट भाषा सिकाएको भन्दै उनले प्रशंसासमेत गरे । हाल दीपज्योतिले जापानमा काम गर्दा जान्नुपर्ने कुराका साथै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पद्धतिबाट भाषा सिकाउँदै आएको छ ।